Igumbi elipholileyo eSydney 2Bed 20mins ukuya kwi-wifi ye-CBD kunye nekhitshi - I-Airbnb
Igumbi elipholileyo eSydney 2Bed 20mins ukuya kwi-wifi ye-CBD kunye nekhitshi
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguCissy
Igumbi lokulala elipholileyo elinegumbi lokufundela (uKumkanikazi om-1 kunye nebhedi yeSofa enye). Kuya kubakho ilinen yokulala. Kukho ikhitshi elinempahla enesikhenkcezisi, impahla yokuhlamba impahla kunye nendawo yokubeka ngaphandle. Igumbi lokuhlambela libucala. I-wifi yentambo yasimahla iyafumaneka.
Isikhululo sebhasi singaphaya kwendlela (umgca we-261) kwaye enye i-3mins kude (umgca we-254/253) eziya kukuthatha zombini ukuya kwi-CBD kwi-20mins. Buza nje kwaye siza kukubonisa indawo. Ubuncinci bokuhlala bubusuku obu-3. Ubuninzi babantu abadala aba-2 kunye nabantwana aba-2.
Uya kuba nokufikelela kwigumbi ngesango labucala elisecaleni lendlu. Kukho ikhitshi esebenza ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela, kwaye igumbi libanzi kakhulu. Iiseti zekhitshi zenziwa nguMiele, kwaye uya kufumana zonke izixhobo eziyimfuneko. Sikwanayo newasha yeempahla kunye nesomisi. Uya kuba namagunjana eempahla zakho, idesika kunye nentsimbi yokuayina. Indawo yethu ilungele ukuhlala ixesha elifutshane okanye elide eSydney.
Le ndlu ikumgama ongama-20min xa usuka eLane Cove Village, eyindawo yeevenkile ezinkulu, ukutya kunye nevenkile yekhefi enejimu kunye nethala leencwadi leemfuno zemihla ngemihla. Kukho ipaki encinci ekufutshane yokuphumla.
Umbuki zindwendwe ngu- Cissy
Ndizakuzama ukukubekela indawo yokuhlala ekhululekileyo xa ufika kwaye ndiza kufumaneka ngoncedo ixesha elininzi. Nangona kunjalo, ukuba ukuthetha ayisiyonto yakho ngenene kulungile.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-23884
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Longueville